मालिक ! पुगेँ गाउँ, अब आउँदिन तिम्रो ठाउँ
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ६ वैशाख
उफ् ! आमाले तोरीको तेल लगाएर माडिदिँदा माडिदिँदा आज त खुट्टा सुन्निन पनि कम भएछ । आज त गाउँतिर निस्कनुपर्ला ।
सुनेको थिएँ, बाजेहरूले बटौलीबाट नुन बोकेर ल्याउने गरेका थिए रे ! तर, लाग्दैनथ्यो पत्यार । अहिले त्यहाँभन्दा २ गुणा बढी हिँड्नेमा आफैँ परेँ । अब त किन नलाग्नु पत्यार ! बरु बाजेभन्दा त म आफैँ बढी हिँड्नेमा परेछु ।
मैले काठमाडौंबाट हिँडेर गुल्मी आउन जति दिन लगाएँ त्यति नै दिन आरम गरेको छु । आमाले खोजी/खनी मीठो मसिनो खुवाउनुु नै भएको छ । कहिले हलेदो-जाउली, कहिले तातो घीउमा झानेर भात, कहिले लोकल कुखुराको मासु र ढिँडो ।
मेरी आमा करिब साढे २ सय घण्टा हिँडेर आएको छोरोलाई बलियो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । वर्षौंदेखि काम गरेँ तर आमाबाका लागि मैले केही गरिनँ । आज मेरो थकान मेटाउनका लागि आमाबाको मिहिनेत कम छैन ।
बाटोको पीडा सुनाउँदा दन्त्यकथाको भन्दा राम्रो कहानी हुन्छ । पूरा बाटोको कुरा सुनाउन त मन लाग्छ तर बाआमाको आँसुको वर्षाले अझै सुनाउन पाएको छैन ।
यसो बाहिर निस्केको थिएँ, मोवाइल बज्यो । आमाले हतार हतार ल्याइदिनुभयो । फोन साहुजीको रहेछ । साहु, जसले मैले ५० पटक फोन गर्दा उठाएका थिएनन्, दर्जनौँ म्यासेजको रिप्लाई गरेका थिएनन् ।
त्यो उद्योगमा थोरै धेरै पढेको र अलिक बढी मिहिनेती म थिएँ । पहिले साहुजी मलाई फोन गरिरहन्थे, माया गर्थे, प्रशंसा गर्थे । अरूलाई काम अह्राउँदा मेरै उदाहरण दिन्थे । तिनै साहु, जसलाई मैले भने प्रशंसा गर्न सकिनँ । कम्तीमा म जस्तो मजदुरको नम्बरमा साहुजीले फोन गरे खुसी हुनुपर्ने तर मन खुसी भएन ।
आँखाबाट बर्सिएको आँसु रोक्नै सकिएन । म जति रोएँ, आमा उति नै रुनुभयो । ३-४ पटक फोन आउँदा उठाउन सकिनँ किनकि के बोल्ने भनेर मुखमा वाक्य नै आएको थिएन । लगातार फोन आएपछि फोन उठाएँ ।
बाआमालाई नसुनाएको बाटोको पीडा साहुजीलाई सुनाएछु । २ छाक भात नखाएको रेकर्ड थिएन । कसैले दिएको चाउचाउ खाएर ८-१० दिन हिँडेको याद । चौरमा सुतेको । खुट्टा ठोसिएर पनि रगताम्य हिँडेको । यिनैयिनै धेरै कुरा गरेँ अनि घर आउनुपरेको कारण पनि ।
म अहिले घर आएको आमाबाको मायाले थिएन । मेरै स्वार्थका कारण र साहुजीको दानवी व्यवहारका कारण थियो । सबै कुरामा इमान्दार हुने मैले कसैलाई ढाँटछल गरेको थिइनँ । तर, यस पटक भने ढाँटछल नगरी सुखै पाएको थिइनँ ।
त्यस्तै ढाँटछल गरेर अहिले पसलबाट २ किलो दालमोठ, २ किलो च्युरा, १० वटा चाउचाउ र ५ बोतल पानी लिएको थिएँ । सामान किनेर सकेपछि पसलका साहुजीलाई पर्स ल्याउन बिर्सेछु, गएर ल्याइदिन्छु भनेँ । अरू बेला पनि यस्तै परेको थियो । तत्काल पैसा लगिदिने गरेको मलाई ती साहुजीले हुन्न भन्न सकेनन् । तर, अहिले भने पसलका साहुजीका लागि यो धोका भयो । म पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ ।
भएका १-२ जोर कपडा र तिनै साहुजीबाट किनेको सामानसहितको झोला बोकेर हिँडेको थिएँ । प्रसंग सुनाउँदै थिएँ । मेरा ‘मालिक’ले बीचबीचमा त्यस्तो होइन बाबू भन्दै थिए । समस्या त्यस्तै परेको भन्दै थिए ।
अहिले सबैका उद्योग खुलिसकेका छन् । हाम्रो साहुजीको उद्योग भने हामी नभएकै कारण नखुलेको रहेछ । हुन पनि ढिलासम्म हामी ८-१० जना बसेका थियौँ । खानै नपाइने अवस्था आएपछि हिँड्नुको विकल्प हाम्रो बीचमा थिएन ।
म करिब १५ मिनेट बोलेपछि साहु १ मिनेट बोले- ‘पहिलेको कुरा नसम्झ, म पनि समस्यामा थिएँ, फोन गरेको पनि थाहा पाइनँ । अरू साथीहरूलाई पनि बोलाऊ, तीमी पनि आऊ, तलब पनि बढाइदिन्छु । तिमीहरू नआए त मेरो उद्योग नै बन्द हुन्छ, बाबू ।
मैले भनेको मान्ने केही साथीहरू थिए, जो अहिले पनि केही भन्यो भने मान्छन् । हुनत मैले अहिले साहुजीलाई जसरी धिक्कारेको छु, भोकै बस्दा, रित्तै हिँड्दा ती साथीले पनि मलाई त्यस्तै धिक्कारेका थिए होला तर केही भनेनन् ।
साहुजीलाई मैले अब भने काठमाडौं आउन नसक्ने बताएँ । गाडीमा १२ घण्टामा आउने गरेको मेरो गाउँमा ६ रात १२ दिन लगाएर आएको छु । आफ्नै गाउँ आउन धेरै दु:ख परिसकेको छ । म आउन नसक्ने व्यहोरा साहुजीलाई जानकारी गराएँ । साहुजीले पनि अहिले दिक्क मानेर फोन राखे ।
पछाडि हेरेको, आमाका आँखामा आँसु सुकिरहेका रहेछन् । मेरा कुराले पलपल आँसु झारिरहेकी मेरी आमा अहिले भने मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, बाबू, ठीक भनिस् । अब जानुपर्दैन । अब यहीँ केही गर्ने हो । बाँझिएका ती पाटामा खेती गरौँला । अहिले त काम गर्दा गाउँमा पनि धेरै कमाइ हुन्छ । बाबू, अब हाम्रो साथ नछोड । तँलाई मागेरै पनि पेट भरी खुवाउँछौँ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०७७, २१:०६:००
गणतन्त्रपछिका १० पूर्ण बजेट : ठूलो आकार, प्रशासनमा केन्द्रित रकम
नीति र व्यवहारमा विरोधाभाष : विद्यतीय वाहनमा करवृद्धि